င ဝန် န ဒီ: March 2011
လစ်ဗျား ကိုမတိုက်ပါနဲ့တရုတ် အရင်းအနှီး ဆုံးတော့မယ်
လစ်ဗျား နိူင်ငံကို နိူင်ငံတကာတပ်တွေ ဝင်တိုက်တော့ တရုတ်က မသိမသာ ကန့် ကွက်တာကနေ အခုတော့ တရုတ်ကရင်းနှီးမြုပ်နှံထားတာတွေ ဆုံးရှုံးမှာ စိုးရိမ်လာပါတယ် ။ကဒါဖီးနဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားတာတွေ ကဒါဖီး အခြေအနေ မကောင်းတော့မှာ စိုးတာလာနဲ့အရင်းအနှီး ဆုံးရှုံးမှာစိုးနေသည်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 11:44 PM No comments:
တရုတ်နိူင်ငံတွင် စီရင်ချက် ကျခံရသော ဖိလစ်ပိုင် နိူင်ငံသား ၃ ဦး အား သေဒဏ် ကျခံရမည် ကို ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ခြင်းမပြုခဲ့ပေ။
စီရင်ချက် ပြောင်းလဲရန် အတွက် ဖိလစ်ပိုင် နိူင်ငံက ထိုင်ဝမ် နိူင်ငံ သား ၁၄ ဦးအား တရုတ်မှ အလိုရှိသဖြင့် လွဲပြောင်းပေးလိုက်သော်လည်း စီရင်ချက်မပြောင်း ပဲ မူးယစ်ဆေးဝါးသယ်ဆောင်မှုအတွက် စီရင်ချက်ကို မပြောင်းလဲပဲ သတ်မှတ်လိုက်သည်။
ကြားမှာ အဆစ်ခံလိုက်ရသော ထိုင်ဝမ်နိူင်ငံသား များဘဝမှာ ရင်လေးစရာဖြစ်တော့သည်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 11:34 PM No comments:
သမ္မတသစ် ဦးသိန်းစိန် ခေါင်းဆောင်သော အစိုးရသစ်က ဒီမိုကရေစီစနစ် စတင်ကူးပြောင်း ကျင့်သုံးတော့မည်
သမ္မတသစ် ဦးသိန်းစိန် ခေါင်းဆောင်သော အစိုးရသစ်က ဒီမိုကရေစီစနစ် စတင်ကူးပြောင်း ကျင့်သုံးတော့မည်ဟု ပြည်သူလူထုသို့ ရုပ်သံမှတဆင့် ပြောဆိုလိုက်သည်။
နိုင်ငံတော်အားကာကွယ်ရန်အတွက် ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ တပ်မတော်တခုရှိရန် လိုအပ်၍ စစ်တပ်ကိုအင်အား တိုးချဲ့သွားမည်ဟု လည်း သမ္မတသစ် က ဆိုသည်။(ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ လေယာဉ်တင်သင်္ဘောံ၊ရေငုပ်သင်္ဘောံ ဝယ်မည်နေပြည်တော်တွင်ရပ်နားမည်။အဏုမြူဗုံး နယူကလီးယား ပိုင်ဆိုင်ပြီး နေပြည်တော်တွင်တည်ဆောက် မည်)
သေချာတာကတော့ စစ်တပ်ကနေ အရပ်သားအစိုးရကို အာဏာ လွှဲပေးလိုက်သည်။(ဘောင်းဘီချွတ် အစိုးရသစ်)(ဘောင်းဘီချွတ် အစိုးရသစ် ကို ဘောင်းဘီ ကျွတ် အစိုးရ ဖြစ်လာဖို့ ကတော့ ပြည်သူတွေ က တဖြည်းဖြည်းလုပ်ယူရပေမည်)
(ဘောင်းဘီချွတ် ဖို့ အထိသာသူတာဝန် ယူပေမည်။ )
အစိုးရသစ်သည် ပြည်သူများအား လုပ်ဆောင်ပေးသွားမည်ဟု ကတိပေးပြောဆိုသည့်အတိုင်း လုပ်ပေးမည်ဆိုပါက မြန်မြန် အကောင်အထည် ဖော်ပေးလျှင်ကောင်းပေမည်။(မြန်ပြည်က ဆိုင်းဘုတ် များ အတိုင်းလုပ်နေသည်မှာ နှစ်များစွာကြာနေပါပြီ)
သမ္မတသစ် ဦးသိန်းစိန်၏ မိန့်ခွန်းတွင် နိုင်ငံရေးပါတီ အများစုကတောင်းဆိုနေသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံး လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးရေးကို ပြောဆိုမသွားသည့်အပြင် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများမှလည်း ပယ်ချခံခဲ့ရသည်။
လွှတ်တော် အစည်းအဝေး တက်ရောက်ခဲ့ကြသော ကိုယ်စားလှယ်များကမူ ပြည်သူများကိုယ်စား တင်ပြ ဆွေးနွေးခဲ့သော အဆိုများကို လွှတ်တော်က ပယ်ချခံခဲ့ရ၍ အားရကျေနပ်မှု မရှိခဲ့ကြကြောင်း၊ အစိုးရသစ်သည်လည်း ပြည်သူများအတွက်
ထူးခြားသော ပြောင်းလဲမှုကို လုပ်ပေးနိုင်မည်ဟု မထင်ကြောင်း ပြောဆိုကြသည်။
နအဖ မှ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ နိုင်ငံတော်သို့ ပြောင်းလဲ၍ အစိုးရသစ် ပေါ်ပေါက်လာခြင်းကို ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂက ကြိုဆိုလိုက်ပြီး အများလက်ခံနိုင်သော အပြောင်းအလဲများအတွက် အစပြုရန် တိုက်တွန်းသည်ဟု ဆိုသည်။
နယူကလီးယား ပလန့်ကိုဂျပန်မှာ ဆန္ဒပြပြီ
Posted by ငဝန်နဒီ at 8:51 PM No comments:
ဂျပန် ကရေ တဖြည်းဖြည်း ပုံမှန် သို့ရောက်ရှိ လာတော့မည်
ယနေ့ဂျပန်မှ သောက်သုံးမရသေးသော် အခြေအနေ မှ တဖြည်းဖြည်း ရေဒီယိုသတ္တိကြွ ပါဝင်မှုနည်းလာသည်။သို့ သော် မိုးရွာလျှင် ပြန်လည်မြင့်တတ်လာနိူင်သည် ။
Posted by ငဝန်နဒီ at 9:43 PM No comments:
အနည်းဆုံး ၇၅ ဦးသေဆုံးပြီး တစ်ရာကျော် အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ ဖြစ် သော ငလျင်
မြန်မာ၊ လာအို၊ ထိုင်း သုံးနိုင်ငံထိစပ်ဒေသတွင် အင်အားပြင်း ငလျင်လှုပ်
မြန်မာ၊ လာအို၊ ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း အနီးတွင် မတ် (၂၄) ရက် ည မြန်မာစံတော်ချိန် (၈) နာရီခွဲတွင် ရစ်ခ်ျတာစကေး (၇) ပြင်းအားရှိသည့် ငလျင် (၂)ခု လှုပ်ခဲ့ကြောင်း အမေရိကန် မြေငလျင်လေ့လာရေးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ ငလျင်သည် မြန်မာ၊ လာအို၊ ထိုင်းနိုင်ငံတို့ ထိစပ်နေသည့် ရွှေတြိဂံနယ်မြေတွင် ဗဟိုပြုလှုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုငလျင်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းပိုင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းနှင့် ပဲခူးတိုင်းများအထိ လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီး။ ထိုင်းနိုင်ငံမြို့တော် ဘန်ကောက် အပါအ၀င် ချင်းရိုင်၊ ချင်းမိုင် မြို့များထိ ရိုက်ခတ်ကာ ချင်းရိုင်မြို့ မြောက်ပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးတဦး အုတ်တံတိုင်းပိ သေဆုံးခဲ့ပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများ ရှိခဲ့သည်။ ဗီယက်နိုင်ငံ ဟနွိုင်းမြို့ အထပ်မြင့်အဆောက်အဦးများမှ လူများပြောင်းရွေ့ခဲ့ရကြောင်း နိုင်ငံတကာသတင်းများတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 9:39 PM No comments:
တိုကျို ရေ လူကြီးတွေ သောက်လို့ ရပြီ
တိုကျို ကရေ က တိုင်းတာချက်အရ ၂၀၀ နီးပါး ဖြစ်လို့လူကြီးတွေတော့ သောက်လို့ ရပြီ။ ပုံမှန်ကတော့ ၁၀၀ ဆိုပေမဲ့ လူကြီးအတွက် ကတော့ ၃၀၀ အထိလို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ချီဘား နဲ့စိုင်းတမ ကတော့ သောက်လို့ မရသေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
နယူကလီးယား စက်ရုံ အလုပ်သမား နှစ်ဦးတော့ ရေဒီယိုသတ္တိကြွ ၁၇၀ ကျော် ထိမိလို့ဆေးရုံပို့ လိုက်သည်။
ကေဘယ်လ်ကြိုး တပ်ဆင်ရင်း မတော်တဆ ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်သွားပြီးအကာအကွယ်တွေ ပါ ပျက်စီးမှု ရှိလို့ ဖြစ်သွားတာပါ။
Posted by ငဝန်နဒီ at 10:24 PM No comments:
ဂျပန်မှ သံရုံး ၂၅ ရုံး ပြန်
ဂျပန်မှ သံရုံး ၂၅ ရုံး ပြန် သော်လည်း မြန်ပြည်သံရုံး မပါဝင်သေးပါဘူး။ဂျာမနီ သံရုံးပါဝင်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 2:50 AM No comments:
Film legend Elizabeth Taylor pass away at 79 in LA (AP)
Posted by ငဝန်နဒီ at 2:24 AM No comments:
တိုကျိုရေပိုက်ခေါင်း ကရေ မသောက်သင့်တော့။နျူကလီးယား ဓာတ်ကြွမှု မြင့်မား
မီးခိုး အမဲတွေကတော့ နည်းနည်း သတိထားဖို့ လိုလာပါပြီ။
ယူရေနီယမ်ချောင်းတွေကတော့ အရည်ပျော်မှတ် မြင့်တဲ့အတွက် အရည်ပျော်နိုင်ခဲပါတယ်။ အငွေ့ပျံနိုင်ခဲ ပါတယ်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 4:45 PM No comments:
* အမြင့်: ၉.၅ လက်မ (၂၄၁.၂ မီလီမီတာ)
* အကျယ်:၇.၃၁လက်မ (၁၈၅.၇ မီလီမီတာ)
* အထူ: ၀.၃၄ လက်မ (၈.၈ မီလီမီတာ)
* အလေးချိန်: ၁.၃၃ ပေါင်(၆၀၁ ဂရမ်)
ဝိုင်ဖိုင် နှင့် သရီးဂျီ မော်ဒယ်ဆိုရင် အလေးချိန်: ၁.၃၅ ပေါင်(၆၁၃ ဂရမ်)
ဖူကူရှီးမား ဒိုင်အိချိ (Fukushima Dai-ichi) နျူကလီးယား ဓာတ်ပေါင်းဖို မီးခိုးထွက်လာ
ကနေ့ညနေ ဖူကူရှီးမား ဒိုင်အိချိ (Fukushima Dai-ichi) နျူကလီးယား ဓာတ်ပေါင်းဖို ၃ က မီးခိုး ထွက်လာပါတယ်။
အဲဒီ ပတ်ဝန်းကျင် နားက ရေတွေမှာတော့ ဓာတ်ရောင်ခြည်သင့်လို့ သောက်သုံးရန် မသင့်ဟုသတ်မှတ် ထားပါတယ်။
ပုံမှန်သောက်သုံးရန် အဆင့်ထက် မြင့်လာသည်ဟုပြောပါသည်။
တောင်ကိုရီးယားမှာတော့ ဓာတ်ရောင်ခြည်သင့်မှု နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တောင်ကိုရီးယားက အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ် အမျိုးသား ကို အွန်လိုင်း မက်စ်ဆက် နှင့် တက်စ် မက်စ်ဆက် တွေနဲ့Peninsula ကို မကြာမှီ ရောက်လာတော့ ဆိုပြီး ပို့ ပေးမှု နဲ့ ရဲ က ထိန်းသိမ်းလိုက်ပါတယ်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 11:17 PM No comments:
တရုတ်နိူင်ငံတွင် ဂျီမေးလ် အနောက်အယှက် ခံရ ဟု ဂူဂယ်လ် စွပ်စွဲ
အင်တာနက်သုံးသူတွေ အခမဲ့ အီးမေးလ်ပို့လို့ရတဲ့ ဂျီမေးလ် (Gmail) ကို လွယ်လွယ်သုံးလို့ မရအောင် တရုတ်အစိုးရက ပိတ်ပင်နေတယ်လို့ Google ကုမ္ပဏီက ပြောလိုက်ပါတယ်။
တရုတ်အစိုးရရဲ့ သတ်မှတ်ချက်ကို လိုက်နာရမှာ စိုးတဲ့အတွက် တရုတ်ဘာသာနဲ့ အချက်အလက် ရှာဖွေပေးတဲ့ Google လုပ်ငန်းကို ဟောင်ကောင်ကို ရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့ Google က အခမဲ့ ဝန်ဆောင်မှု ပေးထားတဲ့ Gtalk အပါအဝင် အင်တာနက်ပေါ်ကနေ စကားပြောလို့ရတဲ့ စနစ်တွေကို အင်တာနက် ကဖေး (Internet Café) တွေမှာ မသုံးရတော့ဘူးလို့ ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
လစ်ဗျား မှ ကဒါဖီး အပစ်ရပ်ရန် တောင်းဆိုသော်လည်း
ကဒါဖီဒ တပ်ဖွဲ့တွေကို လေကြောင်းက မစ်ဆိုင်း ဒုံးကျည်တွေနဲ့ မြေထဲပင်လယ်ထဲကနေ တိုက်ခိုက်နေတဲ့ အနောက်နိုင်ငံ တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ ရေရှည်စစ်ပွဲ ဆင်နွှဲဖို့ အဆင်သင့်ပဲလို့ လစ်ဗျားခေါင်းဆောင် မိုမာ ကဒါဖီ (Moammar Gadhafi) က ပြောလိုက်ပါတယ်။
အဲလိုပြောပြီးနောက် ဒီနေ့ နံနက် ဘီဘီစီ မိုဘိုင်းနယူးမှာ အပစ်ခဏရပ်ဖို့ ပြောသောလည်း အနောက်နိုင်ငံ တပ်ဖွဲ့တွေက အယုံအကြည်မရှိ ပဲ ဆက်လက် ဆင်နွဲ နေပါတယ်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 11:01 PM No comments:
မြန်ပြည်သား တွေ ဂျပန် ကပြန်ကြသော အကြောင်း
ဂျပန် မှာ ဖြစ်နေတဲ့ နျူကလီယားဓာတ်အားပေးရုံ ပြဿနာက အဆင့် ၄ ကနေ အဆင့် ၅ ကိုသတ်မှတ်လိုက်ပါပြီ
အမြင့်ဆုံး အဆင့် က ( ၇) ပါ။
ဖြစ်တဲ့ နေရာ ပတ်ဝန်းကျင်က နွားနို့ တွေမှာဆို ရေဒီယိုသတ္တိကြွ တွေ ပါလာတာ ပုံမှန်ထက်အဆင့်တစ်ခု ပိုနေပါတယ်။
တိုကျိုက ရေထဲမှာလဲ ဓာတ်ရောင်ခြည်သင့်နေပါပြီ အန္တရာယ်မရှိသေးဘူးလို့ ပြောပေမဲ့ မူလလိုတော့ မဟုတ်တော့တာသေချာတယ်။
နောက်တစ်ခုက တိုကျိုနား က ချီးဘား မှာ ကြက်မှာ ဖြစ်တဲ့ရောဂါတွေ ဖြစ်နေပါတယ်
အခု ၁၈ ရက်နေ့ က လခရတဲ့သူတွေ ဘဏ်ထဲကို လခတွေ ဝင်မလာနိူင်သေးတဲ့ ပြဿနာရှိပါတယ်။
နိူင်ငံတကာကိုတောင် ဓာတ်ရောင်ခြည်တွေ ရောက်တာ မိုင်၅၀၀၀ ကျော်ဝေးတဲ့ နိူင်ငံကိုတောင် ရောက်နေပါပြီ ရောက်ဖို့ အချိန်က ၃၆ နာရီပဲကြာတာပါ။
Posted by ငဝန်နဒီ at 8:45 PM No comments:
နျူကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖို နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက်များ
ဂျပန်နိုင်ငံ ဖူကူရှီးမားရှိ နျူကလီးယား စွမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ် ဓါတ်အားပေး စက်ရုံ (၂)ရုံ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်လာတော့ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်လာမှာကတော့
နျူကလီးယား ဓါတ်ရောင်ခြည် နှင့် ရေဒီယို ဓါတ်သတ္တိကြွ ပစ္စည်းယိုစိမ့်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်
စက်ရုံကနေ မိုင် ၁၀၀ ခန့် အကွာမှာရှိတဲ့ အမေရိကန် စစ်သင်္ဘော USS Ronald Reagan က ဓါတ်ရောင်ခြည် ပမာဏ အနည်းငယ် တိုင်းတာရရှိကြောင်း ထုတ်ပြန် ကြေငြာထားပါတယ်။
စီဇီယမ် နှင့် အိုင်အိုဒင်း ရေဒီယိုဓါတ် သတ္တိကြွ အိုက်ဆိုတုပ်များ စက်ရုံ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ပျံ့နှံ့နေနိုင်ကြောင်း
့ အာဂွန်နှင့် နိုက်ထရိုဂျင် များလည်း ပျံ့နှံ့နေနိုင်ပါတယ်။
ယူရေနီယမ်နှင့် ပလူတိုနီယမ်များ ပျံ့နှံ့တတ်ပါတယ်။ပျံနှံတာ မတွေ့ရကြောင်း ဆိုပါတယ်။
လူတွေကို ဘယ်လို အန္တရာယ် ပေးနိုင်တာလဲဆိုတော့
ရေဒီယိုဓါတ်သတ္တိကြွ အိုင်အိုဒင်းတွေကြောင့် သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာ ရောဂါ ဖြစ်နိူင်ပါတယ်။
ရေဒီယိုဓါတ် သတ္တိကြွနေတဲ့ စီဇီယမ်တွေဟာ လူခန္တာကိုယ်ရဲ့ ပျော့ပျောင်းတဲ့ တစ်သျှူးမျှင်များတွင် တွယ်ကပ်နေတတ်ပါတယ်။
ပလူတိုနီယမ် တွေကတော့ အရိုးနှင့် အသည်းမှာ နေနိုင်ပါတယ်။
ရေဒီယိုဓါတ်သတ္တိကြွနေတဲ့ နိုက်ထရိုဂျင် တွေကတော့ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်။
အာဂွန်တွေကတော့ ကျန်းမာရေးကို မထိခိုက်စေနိုင်ပါဘူး။
ယူရေနီယမ်ချောင်းတွေကတော့ အရည်ပျော်မှတ် မြင့်တဲ့အတွက် အရည်ပျော်နိုင်ခဲ။အငွေ့ပျံနိုင်ခဲ ပါတယ်။
ဇာကိုနီယမ် သတ္တုကို နျူလောင်စာချောင်းတွေ ထည့်တဲ့ Casing အနေနဲ့ အသုံးပြုတာပါ။
အပူချိန် သိပ်မြင့်မားတဲ့အခါ ဇာကိုနီယမ်ထဲက ရေနွေးငွေ့တွေဟာ ဟိုက်ဒရိုဂျင် နှင့် အောင်ဆီဂျင် အဖြစ် ကွဲထွက်သွားစေပါတယ်။ ဇာကိုနီယမ် နှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင် ၊ အောက်ဆီဂျင်တို့ အရောအနှောဟာ ပြင်းထန်စွာ ပေါက်ကွဲပါတယ်။
အဆုပ်ကင်ဆာ၊ သွေးကင်ဆာကဲ့သို့ ရောဂါများဖြစ်ပွားနိူင်ပါသည်။ နို့စို့အရွယ်ကလေး သေဆုံးမှုဖြစ်တတ်ပါသည်။
အိုင်အိုဒင်း ဆေးပြားများ လုံလောက်စွာ စားသုံးခြင်းဖြင့် ၄င်းသိုင်းရွိုက်ကင်ဆာရောဂါမှ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
အိုင်အိုဒင်း ဆေးပြား သောက်ထားလို့ လူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ လိုအပ်တဲ့ အိုင်အိုဒင်း အပြည့်အဝရှိနေရင် လေထုထဲမှာရှိတဲ့ အခြား အိုင်အိုဒင်းကို မစုပ်ယူနိုင်တော့ပါဘူး။
ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ရေဒီယို သတ္တိကြွခြင်း မရှိတဲ့ အိုင်အိုဒင်းတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့အတွက် ရေဒီယိုသတ္တိကြွနေတဲ့ အိုင်အိုဒင်းတွေ စုပ်ယူနိုင်ခြင်း မရှိအောင် ကာကွယ် ပေးနိုင်ပါတယ်။
ရေဒီယို သတ္တိကြွနေတဲ့ အိုင်အိုဒင်းတွေကတော့ ပျက်စီးလွယ်ပါတယ်။
တစ်လအတွင်းမှာပဲ အိုင်အိုဒင်းတွေ ပျောက်ကွယ်သွားမှာပါ။
ရေဒီယို သတ္တိကြွနေတဲ့ စီဇီယမ်တွေကတော့ ခန္ဓာကိုယ် ထဲမှာ အကြာကြီးမနေနိုင်ပါဘူး။ တစ်နှစ်အတွင်း ခန္ဓာကိုယ် ထဲက ထွက်သွားမှာပါ။
ဒါပေမဲ့ နျူစက်ရုံ ပေါက်ကွဲရာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ နှစ်ပေါင်း များစွာ ပြဿနာ တစ်ရပ် အသွင်အနေနဲ့ ဆက်လက် တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 8:35 PM No comments:
မရဏ နှင့် စီးချင်း
ဂျပန်မှာ နေတဲ့ မြန်မာတွေ မပြန်ဖြစ်သေးသူတွေ
အ န္တရာယ် ကလည်းရှိတယ်ပြောလို့ ရတဲ့ ငလျင် က လှုပ်နေတာ အခုနောက်ပိုင်းဆို ငလျင်လှုပ်တဲ့ အဆင့် ၄ လောက် ၅ လောက်ဆို ဘာမှ မဖြစ်သလို နဲ့ဖြစ်လာကြပါပြီ။
စားစရာတွေ လည်း ဝယ်သင့်တာတွေ ဝယ်ပြီးသလောက် ဖြစ်နေမှာသေချာတယ်။
ပြေးစရာနေရာတွေ သိသင့်သလောက် သိနေကြမှာပါ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ရေဒီယိုသတ္တိကြွ ဓာတ်ရောင်ခြည်တွေ လာရင်ရော ခေါင်းစွပ်တွေ လက်အိပ်တွေ နှာခေါင်းစည်းတွေ နဲ့တတ်နိူင်သလောက် ကာကွယ်ဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေမှာပါ။
အကောင်းဆုံးကတော့ ကွင်းလယ်ခေါင်တစ်ခုမှာ အခင်းအပြား ကြီးကြီး ခင်းပြီး လေလုံမိုးလုံ တာပေါ်လင်စ ကောင်းကောင်းတဲထိုးပြီး စားစရာအပြည့်အစုံ ပစ္စည်းအပြည့်အစုံနဲ့ ဆို
မရဏ စီးချင်းကို သနားတယ်လို့ ပြောပြီးနေနိူင်မှာပါ။
အန္တရာယ် ကြားက ရယ်မောနိူင်ကြပါစေ
စိတ်မကောင်းစရာပါ စိတ်မကောင်းစရာကြားက ရယ်မောရင်း အန္တရာယ်တွေ ခဏတာမေ့ပျောက်စေဖို့ ပါ
ရေးသာရေးရတာ အညတရ တစ်ယောက်ရင်ကို ထွင်းဖောက် မြင်နိူင်မှာပါ။
ဂျပန်က ဒီအချိန် ငါ ပြောတာပဲယုံဆိုတော့
ဟာ မယုံဘူးလား အေးလေတွေ တိုက်လာပြီ မင်းတို့ ဆီရောက်လာမှာပါ အဲကျမှ သတင်းထုတ်ဟုတ်ပြီလား
ကြောက်ကြောက်နဲ့မြန်မာပြည်က ဆားတွေ ဝယ်နေရပြီမှလား
မြန်ပြည်လူကြီးက ဟားဟားဟား ဆားဈေးငါပြောသလောက်ပေး မှရမှာနော်
အိုဗားမားက ဟာ...ငါလူတွေ ကူဖို့ လွတ်ထားတယ်နော် ငါဘက်လေမတိုက်အောင်လုပ်ပေးကွာ ဒီမှာလဲ စမ်းသပ်တိုင်းတာတဲ့ စက်တွေ တတ်ပါရစေအုံးကွာ
ငါလူတွေ မိုင် ၅၀ ကွာမှာထားပြီးပြန်လို့ ရတဲ့ သူတွေ ပြန်ပါစေကွာ
ှုIAEA ကအကြီးအကဲ က ငါဂျပန် ငါဟာငါပြန်ကြည့်မှာပါကွ
ဂျာမဏီ က ဟာမဖြစ်ဖူး ငါ စက်တွေ ခဏပိတ်ထားမှ တောကြာငါပါ ပြဿနာ ဖြစ်နေအုံးမယ်
ကနေဒါက လည်းအားကျမခံ ကြိုကန်ထားမှ ဖြစ်မယ်
ရေဒီရေးရှင်းပါတဲ့ ရေ တွေ ဂါလံ တစ်သောင်းကျော်စိမ့်ထွက်လို့ပြန်စစ်ဆေးနေပါတယ် သောက်ရင်တောင်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုပဲ
ဂျပန်ကြီးကတော့ အေးငါသတင်းထုတ်တာ မယုံရင် ဖြစ်နေတဲ့ နေရာအထိ တခါးမရှိ ဓားမရှိ ဝင်ရောက်သတင်းရယူနိူင်ပါတယ်တဲ့ ခင်ဗျာ...ငလျင်ကိုတောင် ၈.၈ ကနေ ၉ ပြောင်းပေးထားပါတယ်ကွ
နောက်ထပ်ကွာ နည်းနည်းပေါ့....၂.၄ မီတာပဲ ကျွန်းကရွှေ့ သေးတာ မီတာ တရာပြည့်သေးပါဘူး။
Posted by ငဝန်နဒီ at 12:16 AM No comments:
ကြောက်တတ်သူတွေ ပိုကြောက် ဖို့ 
ဒီနေ့မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်က ပို့ လိုက်တာ လူကိုထိခိုက်တာ အရမ်းကြောက်စရာကောင်းတာကို ပို့ လိုက်တာ ဒေတာစာရွက် အတိအကျနဲ့ ပါ။
စာရွက်ကို မတင်တော့ပါဘူး တအားကြောက်တတ်တဲ့သူတွေ ပိုကြောက်မှာစိုးလို့ ပါ။
အထဲမှာပါတာ တိုကျိုမှာ ရှိတဲ့ ဓာတ်ရောင်ခြည်က ချက်ချင်းထိခိုက်နိူင်တာလို့ပြောထားတာပါ။
တိုကျိုမှာ သွားလာနေသူတွေ ကတော့ ခေါင်းစွပ်တောင်မပါ လက်အိပ်မပါ သွားလာနေကြတာပါ။
ထိုင်းတစ်ယောက်ကတော့ ပြောတယ် ဓာတ်ရောင်ခြည်တွေ တအားများနေပြီ လက်အိပ်စွပ် ခေါင်းစွပ် စွပ်သွားဖို့ ပြောပါတယ်။
ပုသိမ်က သူငယ်ချင်းကတော့ စိတ်ပူစွာနဲ့မေးရှာပါတယ်။ အေးဆေးပဲဆိုတော့။
ဒီလိုပဲပေါ့ကွာ ရောက်နေ မှတော့ မထူးတော့ဘူး ပြန်မလာဖြစ်သေးရင်တော့
ကမ္ဘာပျက်တာမှာ မှ စ ပါတာဆိုပြီးဂုဏ်ယူစရာပါလို့ တောင် အားပေးလိုက်သေးတယ်။
ကြောက်စိတ်တွေ တဖွားဖွားပေါ်လာပြီး ချက်ချင်းထပြေးနိူင်ကြပါစေ။
Posted by ငဝန်နဒီ at 11:55 PM No comments:
အဆက်အသွယ် မခက်သော တိုကျို
သတင်းစာစောင် တခုမှာ ဖတ်ရတာ အဆက်အသွယ် အခက်အခဲ ရှိတယ် လို့ ရေးထားတာတွေ့ လို့ဒီစာရေးတာပါ ။တိုကျိုမှာတော့ လမ်းဘေးဖုန်း ကနေ မြန်ပြည်ကို ဖရီးတောင် ခေါ်လို့ ရနေတာ ကြာပြီပဲ။
ဒါကို အဆက်အသွယ် မရဘူးဆိုတာ တစ်ခုခု လိုနေတာဖြစ်လိမ့်မယ်။
ငလျင်လှုပ်တဲ့ နေ့ က မိုလ်ဗိုင်းတွေ ဖုန်းခေါ်မရတာ ဟုတ်ပါတယ် အင်တာနက် ပျက်မသွားပြတ်မသွားပါဘူး။
အင်တာနက် ဖုန်းသုံးလို့ ရတာကို အများသိအောင်လို့ ဧရာဝတီမှာ ကော့မက်စ် တင်ပါသေးတယ် ဧရာဝတီ က ဖျက်ပြီးမတင်ပေးတော့ မတတ်နိူင်ဘူး
အညတရ စာရေးနေသူဆိုတော့ ဘယ်လိုမှ မကူညီနိူင်တာ စိတ်မကောင်းပါဘူး။
သောကြာနေ့ည မှာပဲ အင်တာနက်ဖုန်းကို ပိုက်ဆံသွင်းပြီးချက်ချင်းသုံး ပြီးမှ ပြောတာပါ။
Posted by ငဝန်နဒီ at 11:42 PM No comments:
တိုကျို ဘယ်လိုလဲ အေးဆေးပါ
သတင်းတွေက ကြောက်စရာတွေရော အမျိုးမျိုးတွေ ဆိုတော့ လူတွေ လန့် နေတာပေါ့။
ဒီနေ့ ဆို ရှင်ဂျီးကု က ရေဒီရေးရှင်း က ၀.၀၅၃ မိုက်ခရိုစီးဗတ် နည်းတောင် နည်းသွားတယ်။
မနေ့ က အပြင်သွားတော့ လူတွေကပုံမှန်ပါပဲ
ဂျပန်က နေ ဘယ်နိူင်ငံကို မဆို ဖုန်းဖရီး ခေါ်လို့ ရအောင်တောင် လုပ်ပေးထားတာ
ကယ်ဆယ်ရေးအတွက် ဒေါ်လာ ၇၀၀ ဘီလီယံ သုံးစွဲမှာဖြစ်တယ်။
အမေရိကန် ကပြောတာ က နယူကလီးယား ပလန့် ကနေ မိုင်၅၀ ကီလိုမီတာ ၈၀ မှာနေဖို့ ပြောတော့ တိုကျိုက ကီလိုမီတာ ၂၅၀ ကျော်မှာရှိတာ မိုင်နဲ့ ဆို ၁၅၀ ကျော်မှာ ရှိတာ ပါ။
ဂျပန်ကနေ ထွက်ခွာတဲ့သူတွေ ရှိနေပါတယ် ။ ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ တချို့ အတွက်တော့ကြောက်တတ်ရင်ကြောက်စရာပါ။
ကြွေဟောင်း မဆပ်ရသေးတဲ့သူတွေ ကြွေးသစ်ချဖို့ နမြောနေ တဲ့သူတွေ ဒီအချိန်မှာ ပိုသိလာမှာပါ သူတို့ တွေ ပိုကြောက်တတ်တာကိုပါ။
ကြောက်တတ်ရင် ရီအန်ထရီဗီဇာ မယူဘဲနဲ့ ပြန်တာ ပိုကောင်းမှာပေါ့ ဘုရင့်နောင်ဖောင်ဖျက်ပေါ့။
နယူကလီးယား ပလန့် မှာ ရေဒီရေးရှင်း က ၃၀ မီတာအမြင့်မှာ ၂၅၀ မိုက်ခရိုစီးဗတ် ၉၀ မီတာ အမြင့်မှာက ၈၇ မိုက်ခရိုစီးဗတ်။
တကယ်တော့ ငလျင်လှုပ်တတ်တဲ့ ဂျပန်မှာ ဗီဇာရတာနဲ့မာတီ ရီအန်ထရီဗီဇာတနေ့ ထဲ ယူလို့ ရပါတယ်။
စာကြွင်း ...မိုးပြိုမှာ ကြောက်ရင် တစ်တစ်တူးလို မိုးပေါ် ခြေထောက်ထောင်အိပ်
ငလျင်ကြောက်လို့ တအားစိတ်ပူရင် ကွင်းလည်ခေါင်မှာအိပ်
အေးအေးဆေးဆေး စဉ်းစားပြီး လုပ်နိူင်ပါစေ။
သတင်းယူတဲ့သူတွေ က ကီလိုမီတာ ၃၀ အကွာ မိုင်၂၀ အကွာ ကသတင်းယူနေရတာပါ ယုံသင့်တာကိုယုံပြီး လုပ်သင့်တာကို လုပ်ရမှာပါ။အနီးကပ်သတင်းတွေ က အစိုးရ ထုတ်ပြန်မှ ရမှာပါ။
မီးရထားတွေ မီးအား အသုံးလျော့ဖို့စောစော သိမ်းတာ လျော့ဆွဲတာတော့ ရှိပါသည်။
ဒီနေရာမှာတော့ မီးဖြတ်သည်ကြားသော်လည်း ယခုချိန်ထိ မီးဖြတ်မခံရသေးပါ။ မီးဖြတ်ခံရရင်တော့ မြန်ပြည် အလွမ်းပြေဖြစ်မှာသေချာတယ်။
အားလုံး အဆင်ပြေပြေ အေးအေးဆေးဆေး ဖြတ်သန်း ဆုံးဖြတ် ကြိုတင်ကာကွယ် နိူင်ကြပါစေ။
ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းမှာ မြန်မာတယောက် တော့ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ် စိတ်အေးချမ်းစွာဖြတ်သန်းနိူင်ပါစေ။
Posted by ငဝန်နဒီ at 12:18 AM No comments:
ရေဒီယိုသတ္တိကြွမှု ကို ကာကွယ်ရန်
တိုကျို မှာ ရေဒီယိုသတ္တိကြွမှု ရှိနေပြီလို့ သိရပါတယ်။ရှင်ဂျီကု မှာ ၀.၈ လို့ ဆိုထားပါတယ် အခုဘယ်လောက်ထိရှိသလဲ တော့ မသိပေမဲ့
ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ ဆိုတာ သိသလောက်ရေးမှာပါ
ပြန်လာတဲ့ အဝတ်အစားတွေကို ပလပ်စတစ်အိတ်ထဲထည့်ပြီးသီးသန့် ထားရပါမယ်
ခေါင်းကနေ ရေလောင်းပြီးချိုးရပါမယ် ၅မိနစ်လောက် ချိုးရပါမယ်။
အပြင်သွားရင် လက်အိတ် နှာခေါင်းစည်း လည်ပင်းစည်း (လည်ပင်းဂလင်းကပိုမိုစုပ်ယူတတ်လို့ )ခေါင်းစွပ် တကိုယ်လုံးလုံလုံ ခြုံခြုံ သွားရပါမယ်။
ဂျပန်မှာ အမြင့်ဆုံးရေဒီယိုသတ္တိကြွမှု က ၂၃ အထက်မှာရှိနေပါတယ်။
စိုင်တမကမ်မှာ ၁.၂ လို့ ဆိုပါတယ်
အမြဲတမ်းပြောင်းနေပါတယ် တိုးလာမှာလား နည်းသွားမှာလား မသိနိူင်ပါဘူး
မနက်ဖြန် ၁၆-၃-၂၀၁၁ မှာ အမေရိကန်က ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေ ရောက်လာမှာပါ။
Posted by ငဝန်နဒီ at 10:58 PM4comments:
Tokyo . Shinjuku today radiation 0.8
6 M earthquake one time finish at 15-3-2011 night 10:31pm
Like that earthquake will come total three times . Now one time finish.40%assume
Posted by ငဝန်နဒီ at 10:42 PM No comments:
ကြိုတင်ကာ ကွယ် မှု
မိုးရေခံ အအေးခံ နိူင် အလျူမီနီယံ အပါးစားဆန်ဆန် အစ ခြုံရန်အတွက် ၄ပေ ၆ ပေ အစ
အဆင်သင့် အိတ်ကို ဆိုင်တချို့ တွင်ဝယ်၍ရပါသည်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 9:53 PM No comments:
ထပ်မံလာမည့် ငလျင် ၇၀ ရာနူန်း သေချာ ၁၃-၃-၂၀၁၁ မှ ၁၆-၃-၂၀၁၁
ထပ်မံလာမည့် ငလျင် ၇၀ ရာနူန်း သေချာ ၁၃-၃-၂၀၁၁ မှ ၁၆-၃-၂၀၁၁ မဂ္ဂနစ်ကျူ ၇ အထိ ရှိနိူင် ဟု ခန့် မှန်းထား
ယနေ့ဆူနာမီ ၅ မီတာ ဖြစ်သွားခဲ့
နျူကလီးယား ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ အမှတ် ၁ ပေါက် ကွဲပြီးနောက် ယနေ့နျူကလီးယား ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ အမှတ် ၃ ထပ်မံပေါက် ကွဲ သွားသည်။
မီးကို အပိုင်းလိုက် ဖြတ်နေသည်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 9:23 PM No comments:
Posted by ငဝန်နဒီ at 12:16 PM No comments:
One more earthquake at 6:35 am 12-march 2011 ...
Posted by ငဝန်နဒီ at 6:35 AM No comments:
ဒီကနေ့ ဂျပန်စံတော်ချိန် နေ့လည် ၂နာရီ ၄၆ မိနစ်အချိန်မှာ တိုကျိူမြို့မြောက်ဘက် မိုင်(၂၃၀) မိုင်အကွာ၊ မိယာငိခရိုင် (Myagi Prefecture) ဆဲန်ဒိုင် Sendai မြို့ရဲ့ အရှေ့ဘက်မိုင်(၈၀) အကွာ ပစိဖိတ်ပင်လယ် ပြင် ရေအောက် (၆)မိုင်နေရာကို ဗဟိုပြုပြီး ရစ်(ခ်ျ)တာစကေး (၈.၉)ရှိတဲ့ ငလျင်ကြီး လှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်၊ ဂျပန် ရဲ့ အရှေ့မြောက်ဘက်ခြမ်းတခုလုံးမှာ၊ လူသေဆုံးမှုတွေ ဒဏ်ရာရသူတွေ အများအပြားရှိခဲ့ပြီးတော့၊ လူပေါင်း များစွာဟာလည်း ထောင်နဲ့ချီပြီး ပျောက်ဆုံးနေကြပါတယ်။ အခုနောက်ဆုံးသတင်းအရ လူသေအလောင်း တွေတွေ့ရှိမှုဟာ ရာဂဏန်းတွေနဲ့ ရှိနေပြီး၊ လူသေဆုံးမှု ကိန်းဂဏန်းဟာ ဒီထက်ပိုများလာဖို့ရှိနေတယ်လို့ ဂျပန်အစိုးရ NHK သတင်းက ဆိုပါတယ်။ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားတွေဖုံးလိုင်းတွေ ပြတ်တောက်နေတာကြောင့်၊ အဆက်အသွယ်တွေ လုပ်လို့မရပဲ၊ ဒေသအလိုက် အသေအပျောက်သတင်းတွေ မရရှိနိုင်ပဲ ဖြစ်နေပါတယ်။
မြို့တော်တိုကျိုမှာ၊ အိမ်ခြေလေးသန်းလောက် လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်နေပြီးတော့၊ ငလျင်ငယ်လေးတွေဆက် ပြီးလှုပ်ခတ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာပိုင်တွေက နောက်ထပ် အင်အားပြင်းငလျင်လှုပ်ခတ်နိုင်တဲ့ သတိပေး မှုကိုကြေညာထားပြီးတော့၊ လူထုကို ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကနေ အပြင်မထွက်ပဲ နေကြဖို့ အမိန့်ထုတ်ထား တာကြောင့် ညဥ့်နက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အထိ လူတွေဟာ ရုံးတွေနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာပဲ နေနေကြရပါတယ်။ တိုကျိုမြို့မှာ အဆောက်အဦးတချို့ရဲ့ အမိုးတွေ ပြိုကျခဲ့ပြီးတော့၊ ငလျင်ကြောင့် မီးလောင်နေကြတဲ့ တိုကျိုက မြို့နယ်တချို့ထဲမှာ မြန်မာအများစုနေထိုင်ရာ Toshima မြို့နယ် လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ လေဆိပ်ရေဆိပ်ဘူတာ ရုံတွေ အားလုံးကို အစိုးရကပိတ် ထားလိုက်ပြီး၊ လမ်းတွေပေါ်မှာ တာဝန်ရှိသူတွေကလွဲပြီး အသွားအလာအား လုံး ရပ်ဆိုင်းနေပါတယ်။
ငလျင်ကြောင့် ဂျပန်အရှေ့ဘက်ကမ်းခြေက ဆဲန်ဒိုင် Sendai မြို့နဲ့ ဖုခုရှီးမခရိုင် (Fukushima Prefecture) အိုနဟမ Onahama မြို့တွေမှာ၊ (၃၃)ပေကျော် ဆူနားမိလှိုင်းလုံးတွေ ဖုံးလွှမ်း သွားခဲ့ပြီးတော့ ဆဲန်ဒိုင် Sendai မြို့မှာ ရေအောက်နစ်မြုပ်သေဆုံးသူ အလောင်းတွေကို ရာနဲ့ချီ တွေ့ရတယ် လို့ AP သတင်းမှာ ဆိုပါ တယ်။ ကမ်းခြေမှာခုတ်မောင်းနေတဲ့ အရေအတွက်မသိရသေးတဲ့ ခရီးသည်တွေလိုက်ပါလာတဲ့ ရထားတစီး ပျောက်ဆုံးနေပြီးတော့၊ ခရီးသည် (၁၀၀)ကျော်လိုက်ပါလာတဲ့ ကူးတို့သင်္ဘောတစီးဟာလည်း၊ ရေအောက် ကို နစ်မြုပ်သွားတာကြောင့် ခရီးသည်တွေ အားလုံးသေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။
ဂျပန်အစိုးရဟာ အရေးပေါ်လုပ်ငန်းများ စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်ရေးကော်မီတီကို ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီး၊ ငလျင်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ဆိုးကျိုးတွေကို သေးငယ်နိုင်သမျှသေးငယ်သွားအောင် အစိုးရက လုပ်ကိုင်သွားမှာဖြစ်ပြီး တော့၊ ဂျပန်လူထုအနေနဲ့ ရေဒီယိုရုပ်မြင်သံကြား သတင်းတွေကနေ အစိုးရရဲ့သတိပေးချက်တွေကို အာရုံ စိုက်နေကြဖို့ကို ၀န်ကြီးချုပ် နာအိုး ထိုးခမ်း(Naoto Kan) က ရုပ်သံလွှင့် ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ နျူးကလီး ယားစွမ်းအင်နဲ့ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစက်ရုံတွေဟာ ငလျင်လှုပ်ရင် စက်ရုံလည်ပတ်မှု အလိုအလျောက်ရပ် ဆိုင်းသွားတဲ့ စနစ်ကြောင့် ရေဒီယို သတ္တိကြွယိုစိမ့်မှု မရှိဘူးလို့၊ ၀န်ကြီးချုပ်နာအိုးထိုးခမ်းက ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဆဲန်ဒိုင် Sendai မြို့က အိုနင၀ Onagawa နျူးကလီးယားလျှပ်စစ် ဓါတ်အားပေးစက်ရုံ မီးလောင် ပျက်စီးသွားတာကြောင့် ရေဒီယိုသတ္တိကြွယိုစိမ့်မှု မဖြစ်ပေါ်စေရေး သီးသန့်ကော်မီတီကို ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက် သွားမယ်လို့ ညနေပိုင်းမှာ အစိုးရက ကြေညာပါတယ်။ ဖုခုရှီးမခရိုင်က ဒိုင်းအိချိ (Daiichi) နျူးကလီးယား လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစက်ရုံမှာလည်း အအေးခံစနစ် ပျက်စီးသွားတာကြောင့်၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွယိုစိမ့်မှု ဖြစ် ပေါ်လာမှာကို စိုးရိမ်နေရပါတယ်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 6:26 AM No comments:
ငလျင် ယနေ့မနက် ၆နာရီ ၁၁မိနစ် တွင် ၄ မဂ္ဂနီကျူ လှုပ်နေတုန်း
Posted by ငဝန်နဒီ at 6:16 AM No comments:
ဂျပန် ငလျင် လှုပ်ခတ်မှု
နေ့ လည် ၂နာရီ၄၆ မိနစ် ကငလျင် လှုပ်နေတာ အခု ၇နာရီ ၃၅ မိနစ် အထိ နည်းနည်း စီ လှုပ်နေတုန်းပဲ။ သူငယ်ချင်းများမိတ်ဆွေများ အခုချိန်ထိ ငလျင် လှုပ်သော်လည်း အေးချမ်းစွာသတင်းကြည့်နေပါသည်။ ဖုန်းလှမ်းဆက်သော ကိုတတ်အားကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။ ဂတ်စ် လိုင်းတော့ ပြတ်တောက် နေသေးသည်။ ယခု တင်နေချိန် ၁၂ မတ်လ နံနက် အာရုံ မတတ်မှီ ၀၀ နာရီ ၅၀ မိနစ် အထိ အသေးစား ငလျင်လေးများလှုပ်နေ သေးသည် တချို့ သော နေရာများတွင် မီးလောင် နေပါသည်။ ဆူနာမီ သတိပေးချက် ယခုထိ ရှိနေသေးသည်။
အိုင်ပက်စ် ၁၁ ရက် မတ်လ တွင် အမေရိကန် နိူင်ငံ တွင် စထွက်မည်။
Ipad 2ဒီနေ့ ထွက်မည်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 8:00 AM No comments:
ငယ်ငယ်လေးတုန်းက တချုို့ ကပြောတယ် ကမ္ဘာကြီးသည် ကျောင်းတွင် လုံး၍ အိမ်တွင် ပြားပါသည်။
အိမ်တွင် ကမ္ဘာကြီး ပြားရခြင်းမှာ အဖေ ကမပြားပဲ လုံးသည် ပြောလျှင် ရိုက်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
မြန်ပြည်မှာ ဒီမိုကရေစီ နိူင်ငံ ထူထောင်နေပါသည်။
မြန်ပြည်ဒီမို ကရေစီ ဘယ်လိုမျိူးရနေပြီလည်း လူတိုင်းစဉ်းစား ငေးမောချိန်တွင်
ညစာစားပွဲ ကျင်းပချိန် တွင်
ဒီမိုကရေစီ ရရှိ မြင်ကွင်းကို တွေ့ လိုက် ရသော်
ယောက်ျား စင်စစ်ကြီးများသည် ဖုန်းကညာတပါး လုံးရာကပြားသွားသည်ကို မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့ လိုက်ရသဖြင့်
မြန်ပြည်ဒီမိုကရေစီ သည် ရနေပါသည်...လုံးလုံးကြီးတော့ မဟုတ်သော်လည်း
အမျိုးသမီး အမတ်တွေ ဘယ်လိုချိတ် လုံချည် ဝတ်ပါသလဲ။
အခုရက်ပိုင်း မြန်ပြည်မှာ လွှတ်တော်တွေခေါ် အမျိုး သမီး အမတ်တွေ ပါ ပါ လာတာ ကြားရတော့
အမျိုးသား လွှတ်တော် လူကြီးတွေ ချိတ် လုံချည်တွေ ဝတ်ကြတော့
အမျိုးသမီး အမတ်တွေ ကော ဘယ်လိုချိတ် လုံချည် ဝတ်ပါသလဲ။
အထက်ဆင်တတ်ပြီး အဆင်တူတာ ဝတ်မိရင် ဘာဖြစ်နိူင်ပါသလဲ။
သို့ လောသို့ လော တွေးရင်း မြန်ပြည်ဖွား မြန်ပြည်သားတွေ
အစိုးရသစ် လက်ထက် မှာ ဘာဝတ်ရမှာလဲ တွေးရင်း...သင်ရော ချိတ်လုံချည် ဝတ်ချင်နေပြီလား။
လေယာဉ်တင်သင်္ဘော USS Kearsarge အုပ်စု ဟာ စူးအက်တူးမြောင်းကို ဖြတ်ကျော်ပြီး၊ မယ်ဒီတေးရီးယန်း ပင်လယ်ကို ဦးတည်ခုတ်မောင်းလာနေပါပြီ။
လစ်ဗျား နိုင်ငံ မြို့ တော် ထရီပို ၏ အရှေ့ ဘက် မိုင် ၂၀ ခန့် အကွာ မှာ မြို့ စောင့် တပ် တစ်ခု ကို ရေနံတွင်းစောင့်တပ်(နယ်တပ်) များ နှင့် ပြည်သူများက ယနေ့ စီးနင်းထားစဉ် Photo : Aljazerra ဂျက်ဖရီ၊ ၊ခောတ်မှီ လက်နက် တွေ တပ်ဆင်ထားပြီး စစ်သား ဦးရေ ခြောက်သိန်း ကျော်ရှိကာကဒါဖီကငှားရမ်း ထားသည့် ကြေးစားတပ်အင်အား ငါးသောင်းကျော် ရှိသည့် လစ်ဗျားအာဏာရှင်ကို အံတုနေ သည့် လစ်ဗျား ပြည်သူများ ကို ကူညီရန် အလို့ ငှာ အမေရိကန် ရေတပ်မတော်လက်အောက် ခံ လေတပ် နှင့် အခြားတပ်ရင်း တပ် ဖွဲ့ များသည် ၎င်း သို့ စခန်းချရာ နေရာတစ်ခု မှမြေထဲ ပင်လယ်ရှိ လစ်ဗျား နိုင်ငံ ရေနက် ဆိပ်ကမ်း နေရာ သို့ ခုတ် မောင်းနေပြီ ဖြစ်သည်။ထိုစစ်ရေယာဉ် အုပ်စု တွင် တိုက်ခိုက်ရေး ရဟတ် ယာဉ် ၁၄ စီး နှင့် တိုက်လေယာဉ် ၁၀ စီးပါဝင်သည်။
လစ်ဗျား အာဏာရှင် ကဒါဗီ ရဲ့ လက်ကိုင်ဒုတ် တပ်ဖွဲ့ဝင်များက လစ်ဗျားပြည်သူများ ကို လေကြောင်းမှ ဗုံးကြဲပြီး သတ်ဖြတ် တိုက်ခိုက်နေမှုကို ရပ်တန့်အောင် ဆောင်ရွက်ဖို့ အသင့်အနေအထားရှိစေရန် ပင်လယ်နီ မှာ အခြေစိုက်ထားတဲ့ အမေရိကန် လေယာဉ်တင်သင်္ဘော USS Kearsarge အုပ်စု ဟာ စူးအက်တူးမြောင်းကို ဖြတ်ကျော်ပြီး၊ မယ်ဒီတေးရီးယန်း ပင်လယ်ကို ဦးတည်ခုတ်မောင်းလာနေပါပြီ။ ဒီလေယာဉ်တင်သင်္ဘောမှာ ဟယ်လီကော်ပါတာ များ၊ ဟယ်ရီယာ တိုက်ခိုက်ရေး ဂျက်တိုက်လေယာဉ်များနဲ့ အတူ မရိမ်းအထူးစစ်သည် ၇၀၀ ကျော်ပါရှိတယ်လို့ သိရှိရပါသည်။ ဒီ လေယာဉ် တင်သင်္ဘော USS Kearsarge အုပ်စု ဟာ လစ်ဗျား လေပိုင်နက်မှာ လေယာဉ် မပျံသန်းရ (No Fly Zone) ကို အရေးယူစောင့်ကြည့်ဖို့ ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း သတင်းများတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 9:41 PM No comments:
လစ်ဗျား ကိုမတိုက်ပါနဲ့တရုတ် အရင်းအနှီး ဆုံးတော့မ...
သမ္မတသစ် ဦးသိန်းစိန် ခေါင်းဆောင်သော အစိုးရသစ်က ဒီမ...
ဂျပန် ကရေ တဖြည်းဖြည်း ပုံမှန် သို့ရောက်ရှိ လာတော...
အနည်းဆုံး ၇၅ ဦးသေဆုံးပြီး တစ်ရာကျော် အိုးမဲ့ အိမ်...
Film legend Elizabeth Taylor pass away at 79 in LA...
တိုကျိုရေပိုက်ခေါင်း ကရေ မသောက်သင့်တော့။နျူကလီးယ...
ဖူကူရှီးမား ဒိုင်အိချိ (Fukushima Dai-ichi) နျူကလီ...
တရုတ်နိူင်ငံတွင် ဂျီမေးလ် အနောက်အယှက် ခံရ ဟု ဂူဂယ်...
6 M earthquake one time finish at 15-3-2011 night ...
ထပ်မံလာမည့် ငလျင် ၇၀ ရာနူန်း သေချာ ၁၃-၃-၂၀၁၁ မှ ၁၆...
ဒီကနေ့ ဂျပန်စံတော်ချိန် နေ့လည် ၂နာရီ ၄၆ မိနစ်အချိ...
ငလျင် ယနေ့မနက် ၆နာရီ ၁၁မိနစ် တွင် ၄ မဂ္ဂနီကျူ လှုပ...
အိုင်ပက်စ် ၁၁ ရက် မတ်လ တွင် အမေရိကန် နိူင်ငံ တွင် ...
ငယ်ငယ်လေးတုန်းက တချုို့ ကပြောတယ် ကမ္ဘာကြီးသည် ကျောင...
လေယာဉ်တင်သင်္ဘော USS Kearsarge အုပ်စု ဟာ စူးအက်တူြးေ...